Maanta waa 21/October waaa maalinkii uu dalka Somalia ka hirgalay kacaankii ciidamadu hogaaminayeen.
Maanta waa 21/October waaa maalinkii uu dalka Somalia ka hirgalay kacaankii ciidamadu hogaaminayeen. Hadaba waa muhiim in aan xasuusno Kacaankaas oo dalka Somalia ka hirgaliyay hormaro badan oo la taaban karo. Sidoo kale kacaankaas waxaa lagu eedayaa in uu kow ka ahaa bur burkii dalka. Hadaba aniga oo maanta Xusaya Maalintaan Taarikhiga ah aan ku hormaro wax qabadkii kacaanka. Ugu horeyn Maxamed siyaad Barre AUN waxaa uu ahaa hogaamiye daacad ah Somali ah aragti hogaamiyenimo oo rasmi ah leh. Wuxuu ahaa halyay aan ka baqin waxkasta oo danta dalka iyo dadku ku jirto.Maxamed Siyaad waxaa uu Somalia u horseeday in ay sanado yar gudohood ku gaarto heer aan wali la arag.